Naya Post Nepal | सुन्दरी छोरीसँग विवाह गर्नेलाई दुई करोड दिने बाबुको घोषणा !
काठमाडौं । थाइल्याण्डका एक करोडपतिले आफ्नी कुमारी छोरीसँग विवाह गर्ने केटालाई दुई करोड भन्दाबढी रकम दिने घोषणा गरेका छन्।थाइल्याण्डको दक्षिणी प्रान्त चुन्फोन प्रदेशका करोडपति अर्नोन राेडथोंगले छोरी कार्नसितासँग विवहा गर्नेलाई उक्त रकम दिने घोषणा गरेका हुन्।
कार्नसिता २६ वर्षकी छन्। उनले ब्याच्लर पढेकी छन् भने चिनियाँ र अंग्रेजी भाषा बोल्न सक्छिन्। ५८ वर्षका अर्नोन फलहरूको फार्मका मालिक हुन्। उनले आफ्नी छोरीसँग विवहा गर्ने केटामा तीन योग्यता हुनु पर्ने बताएका छन्।
केटा स्मार्ट हुन जरुरी छैन तर पढ्न लेख्न जानेको हुनुपर्छ । अल्छी हुुनु हुँदैन परिश्रमि हुन जरुरी छ। पैसाका बारेमा कन्जुस र फलहरूलाई माया गर्ने हुन जरुरी छ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नी छोरी कुमारी रहेको र पारिवारिक व्यापारमा सहयोग गर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् । विवाहका लागि राष्ट्रियताको सीमा जरुरी नभएको उनले बताएका छन्।
छोराहरू भएपनि विवाहपछि सबै सम्पत्ति ज्वाँइलाई दिने उनले बताएका छन्। साथै व्यापार पनि सम्हालनु पर्ने छ। मिररको रिर्पोट अनुसार उनी छोरीको विवाह नभएका कारण तनाबमा छन् र यस्तो फैसला गरेका हुन्।
२०७९ बैशाख २३, शुक्रबार प्रकाशित0Minutes 391 Views
बिबाह भएको केही दिनमा नै विवाह गराउने पण्डितसँग भगिन दुलही !
८ सन्तानकी आमा प्रेमीसँग फरार, प्रहरी चौकी पुग्दा खुल्यो नालीबेली
महिनामा करोड कमाउने बाख्रा, हेर्ने मान्छे चकित (हेर्नुस् रोचक भिडियो)